COPA AMERICA: Xulka Argentina oo si xarago leh isaga xaadiriyay semi-final ka…(Messi oo lagu soo bilaabay kulankiisii ugu horreeyay)+SAWIRRO – Gool FM
COPA AMERICA: Xulka Argentina oo si xarago leh isaga xaadiriyay semi-final ka…(Messi oo lagu soo bilaabay kulankiisii ugu horreeyay)+SAWIRRO
Byare June 19, 2016
(America) 19 Juunyo 2016. Argentina ayaa si sahlan uga talaabsatay xulka Venezuela oo ay ku martay 4-1 waxayna iska xaadiriyeen afar dhammaadka Copa America.
Gonzalo Higuain ayaa hogaanka u dhiibay xulka Argentina daqiiqadii 8-aad ee ciyaarta kubbad uu meel dheer uga soo baasay Lionel Messi oo ku soo bilwoday ciyaartan kulankiisii ugu horreeyay ee Copa America sanadka cusub, Higuain ayaana dhammeystiray baaska Lio isagoo sii dhacaya.
Higuain ayaa misane labeystay ciyaarta markan waxaa hadiyad siiyay mid ka mid ah xiddigaha Venezuela oo dib baas ugu celiyay gooshiisa, weeraryahanka Napoli ayaana ka faa’iideystay khaladkaa isagoo si tartiib ah u hor maray goolhayaha shabaqana dhex dhiga daqiiqadii 28-aad.
Waa goolashiisii 27- iyo 28-aad uu u dhaliyo xulka lagu naaneyso Albiceleste.
Dhammaadka qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa gool ku laad helay xulka Venezuela balse waxaa ka khasaariyay Luis Seijas oo isku dayay inuu jaf yar ka dhaliyo goolhayaha balse waa looga raaxeystay.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta daqiiiqadii 60-aad Lionel Messi ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee xulkiisa kubbad ay isku dhiib-dhiibeen xiddigaha Albiceleste oo uu markii dambe Gaitan lugta u galiyay Messi oo si sahlan u dhaliyay goosha.
Jose Salomon Rondon ayaa goolka madiga ah u dhaliyay xulkiisa Venezuela daqiiqadii 70-aad kubbad ka timid dhinac oo uu madaxeeyay.
Erik Lamela ayaa dhammeystiray goolka afaraad ee xulkiisa kaddib markii uu taabashada koowaad ku dhaliyay mar uu badel ku soo galay afar daqiiqo uun ka hor, Lionel Messi ayaa caawiyay goolka.
Argentina dhinaceeda dhulka lama dhigin 13-kii kulan ee ugu dambeeyay ee Copa America 7-guul iyo 6-jeer bar-baro.
Waa kulankii shanaad ay Argentina iyo Venezuela isku qabtaan Copa America waxaana shanta kulanba badiyay xulka Argentina 24-gool ayuu ka dhaliyay 2-gool oo qura ayaa isna laga dhaliyay.
Kulankii ugu dambeeyay ay labadan xul isku arkaan Copa America wuxuu ahaa 1991 kolkaa uu xulka Argentina ku adkaaday 3-0.
Argentina ayaa semi-final ka la ciyaari doonta xulka marti galinaya koobka ee Mareykanka.
Muxuu Antonio Conte ka damacsan yahay FLOP-kii Chelsea?
Lionel Messi oo soo bar-bareeyay RIKOODHKII Gabriel Batistuta